နမူနာစာမျက်နှာ - Jumma မူဘာရက် 2018 : အရေးကြီးပုံ, နှစ်, မင်္ဂလာသက်, ः ades, နှင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်
ဒါကဥပမာတစ်ခုစာမျက်နှာ. ဒါကြောင့်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆက်နေပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့် site ကိုအညွှန်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ blog post: ထံမှကွဲပြားခြားနားသောင် (အများဆုံးအကြောင်းအရာများအတွက်). လူအများစုဟာအလားအလာ site ကိုဧည့်သည်များကသူတို့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းစာမျက်နှာနှင့်အတူစတင်. ဒါဟာဤကဲ့သို့သောတစ်ခုခုပြောစေခြင်းငှါ,:
ဟိုင်း! ငါတစ်ရက်ကစက်ဘီး messenger ကိုပေါ့, ညဉ့်အခါမင်းသားအယောင်ဆောင်, နှင့်ဤငါ၏အက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. ငါ Los Angeles မှာနထေိုငျ, ဂျက်အမည်ရှိကြီးမြတ်ခွေးပြီ, ငါpiña coladas ကြိုက်တယ်. (ထိုအတာ’ မိုးရွာများတွင်ဖမ်းမိ။)
အဆိုပါ XYZ Doohickey ကုမ္ပဏီအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ 1971, အစဉ်အမြဲကတည်းကအများပြည်သူအရည်အသွေးကို doohickeys ပေးလျက်ရှိသည်. Gotham City, တည်ရှိသော, XYZ ကျော်လုပ်ကိုင် 2,000 လူတွေနှင့် Gotham အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်အရာပေအမျိုးမျိုး.
အသစ်တစ်ခုကို WordPress အသုံးပြုသူအဖြစ်, သငျသညျကိုသွားသင့်တယ် သင့်ဒက်ရှ်ဘုတ် ဒီစာမျက်နှာကိုဖျက်နှင့်သင့်အကြောင်းအရာသစ်စာမကျြနှာကိုဖနျတီးဖို့. ပျော်ရွှင်ပါစေ!
Jumma မူဘာရက် Wish 2018 ပုံများနှင့်အတူ & …